ပေါ့ဘာ မပါ ၊ မာရှယ် မပါချိန် မှာ လူငယ်တွေ နဲ့ လက်စတာ ကို အနိုင်ယူမှာလား မစ္စတာ ဆိုးရှား - SPORTS MYANMAR
ပေါ့ဘာ မပါ ၊ မာရှယ် မပါချိန် မှာ လူငယ်တွေ နဲ့ လက်စတာ ကို အနိုင်ယူမှာလား မစ္စတာ ဆိုးရှား
ပွဲစဉ် ( ၁ ) မှာ ယူနိုက်တက် တို့ ချဲလ်ဆီး ကို ဂိုးပြတ် နိုင်လိုက် ပါတယ် ။ အားလုံး က ယူနိုက်တက် ပြန်လာ ပြီ ၊ ဆိုးရှား ဟာ အသင့်တော်ဆုံး ၊ ၀ုဒ်ဝက် ကြီး ကျန်းမာပါစေ တွေ ဖြစ်ကုန် ကြပါတယ် ။ ပွဲစဉ် ၄ အပြီး မှာတော့ ဒီ အမြင်တွေ က အဖြူ နဲ့ အမည်း လို ခြားနား သွားခဲ့ ပြန်ပါတယ် ။ အခု သူတို့ လက်စတာ စီးတီး နဲ့ ရင်ဆိုင် ရတော့ မှာပါ ။ ဒီ ပွဲ ကို ပါ မနိုင် ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ၄ ပွဲ ဆက်တိုက် နိုင်ပွဲ ပျောက်မှာ ဖြစ်ပြီး သမိုင်း တစ်လျောက် အဖွင့် ရလဒ် အဆိုးဆုံး ဘာညာ စတဲ့ မှတ်တမ်း ဆိုးကြီးတွေ ရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်လာ မှာ မလွဲ ဧကန် ပါပဲ ။
ဒီလို ပြောလိုက်လို့ ယူနိုက်တက် က လက်စတာ ကို အနိုင် ကစား ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ် နေပြီ ဆိုတာ အားလုံး ရိပ်စား မိလောက် ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် လက်စတာ ကို ယူနိုက်တက် နိုင်ပါ့မလား . . .
ပွဲ မကစားခင် လူအင်အား ကို ကြည့်လိုက် ရအောင် ။ လက်စတာ ဘက်မှာ အဓိက ကစား သမားတွေ အစုံ အလင် ပါလာ မှာပါ ။ ယူနိုက်တက် ဘက် မှာ ပေါ့ဘာ ၊ မာရှယ် ၊ လုခ်ရှော တို့ မပါ သလို ဘစ်ဆာကာ ကိုလည်း ပွဲထုတ် မထုတ် မသေချာ သေးပါဘူး ။
တကယ်လို့ ဘစ်ဆာကာ သာ မပါလာခဲ့ရင် ယူနိုက်တက် ခံစစ် က တော်တော်လေး ယိုယွင်းသွား နိုင်ပါတယ် ။ ဂျေမီ ဗာဒီ နဲ့ မက်ဒီဆင် တို့ ဟာ မြန်ပြီး တိုးအား ကောင်းတာ ကြောင့် လေးလံ တဲ့ မက်ဂွဲယား တစ်ယောက် အကူ မပါဘဲ ထိန်းဖို့ မလွယ် ပါဘူး ။ အက်ရ်ှလေယန်း အကြောင်း ကတော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကောင်းကောင်း သိပြီး ဖြစ်မှာပါ ။
ကွင်းလယ် မှာ လည်း ပေါ့ဘာ မပါရင် ဖန်တီးမှု ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား လို့ မေးရ လောက်တဲ့ အထိ ကျန်တဲ့ ကစား သမားတွေ က နုံချာ နေပါတယ် ။ ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူ မပါနိုင်တာ ကြောင့် ဒီညမှာ တော်မီနေး ၊ ဖရက် ၊ ပါရဲရား အတွဲ ကို မြင်ရနိုင် ပါတယ် ။ ဒီ ကွင်းလယ် အတွဲ ကို အဆင့် သတ်မှတ် ရရင် ဆောက်သမ်တန် ၊ နယူးကာဆယ် ၊ နောဝှစ်ခ်ျ တို့ အဆင့် လောက်ပဲ သတ်မှတ်လို့ ရမှာပါ ။ ဒီ ကွင်းလယ် ကနေ ဘာတွေ စွမ်းဆောင် ပြမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ချင် ပါသေးတယ် ။
တိုက်စစ် ပိုင်း မှာတော့ မာရှယ် မပါတဲ့ အတွက် ရက်ဖိုဒ့် က အထောင်တိုက်စစ်မှုး အဖြစ် ပွဲထွက်လာ နိုင် ပါတယ် ။ တောင်ပံ ၂ ဖက် မှာတော့ ဂျိမ်းစ် နဲ့ ဂရင်းဝုဒ် ( သို့ ) မာတာ တို့ ပါဝင် လာဖို့ အလားအလာ များနေပြီး ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် ကို ဘယ်တောင်ပံ မှာ ထား ကစားမယ် ဆိုရင် လက်စတာ ခံစစ် ကို အလုပ်ရှုပ် စေနိုင် ဖို့ ရှိ ပါတယ် ။
ဒီညပွဲမှာ စောင့်ကြည့်ချင်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစား သမားက ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် ပါပဲ ။ ဂျိမ်းစ် ဟာ အတွင်း ကို ချိုးဝင် ပြီး ညာခြေနဲ့ ကန်သွင်း ရာမှာ အားပါ တိကျ ကောင်းမွန် သူ ဖြစ်ကြောင်း ပဲလေ့စ် ၊ ဆောက်သမ်တန် ၊ ဘီလာရု ( လက်ရွေးစင် ခြေစမ်းပွဲ ) က ဂိုးတွေ က သက်သေ ပြခဲ့ ပါတယ် ။ ညာ တောင်ပံ မှာ ထားရင် တော့ ဖြတ်တင် ဘောတွေ ကိုသာ မြင်ရနိုင် ပြီး ဘယ်ခြေ အား မသန်သေးတဲ့ အတွက် ဘယ်တောင်ပံ က သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှာ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်တာက ဒီ ကစား သမား ၃ ဦး မှာ ဘယ်သူ က ခေါင်းဆောင် လဲ ဆိုတာပါပဲ ။ ၃ ယောက် စလုံး ဟာ လူငယ် တွေ ဖြစ်ပြီး တွဲ ကစား တာလည်း သိပ် မကြာသေး ပါဘူး ။ ဂရင်းဝုဒ် နေရာ မှာ မာတာ ဆိုရင်တော့ ၄-၃-၃ ကနေ ၄-၂-၃-၁ ပုံစံ နဲ့ ကစားနိုင် ပြီး ကွင်းလယ် နဲ့ တိုက်စစ် က လူငယ်တွေ အတွက် အချိတ်အဆက် တစ်ခု အဖြစ် လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ချေ ရှိ ပါတယ် ။ ဂရင်းဝုဒ် နဲ့ ဆိုရင်တော့ တိုက်စစ် ရော ကွင်းလယ် ပါ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်း ဖြစ်ပြီး အစည်းပြေတဲ့ ကစားကွက် ကို မြင်တွေ့ ရမှာပါ ။
လက်ရှိ အနေ အထား အရ လက်စတာ က အထက် အသင်း ၊ ယူနိုက်တက် က အောက် အသင်း ဖြစ်နေ ပါပြီ ။ လက်စတာ က ၃ မှတ် ရ အောင်ကြိုးစား မယ့် အသင်း ၊ ယူနိုက်တက် က ခံစစ် အထိုင်ချ ပြီး လက်သီးပုန်းထိုး ရမယ့် အသင်း ၊ အနေ အထား က ဒီလို ပဲ ဖြစ်သင့် ပါတယ် ။ ဒါကို ယူနိုက်တက်တို့ မျက်ကွယ် ပြုပြီး လက်စတာ ကို အထက် စီးဆန်ဆန် သွား ကစားရင်တော့ ကြီးမားတဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေ နဲ့ သာ ကြုံတွေ့ ရမှာပါ ။
ကစားကွက် နဲ့ လူထုတ်ပုံ မှားလို့ ကတော့ ရှုံးဖုိ့ သေချာ ပါတယ် ။ ကိုယ့် အခြေအနေ ကိုယ် သိပြီး အောက် အသင်း တစ်သင်းလို ပြင်ဆင် ထားမှ သရေ ရဖို့ အခြေ အနေ ရှိပြီး ကံကောင်းမှ အနိုင် ဆိုတာ မြင်ရမှာပါ ။ ဟိုတယ် ရောက် လူစာရင်းမှာ လူငယ်တွေ ပါလာလို့ ၀မ်းသာ အားရ အော်ဟစ် ကြွေးကြော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိ ပါတယ် ။ ည ရောက်ရင် သူတို့ပဲ အဲ့ဒီ လူငယ်တွေ အသုံးမကျဘူး ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ဆဲရေး တိုင်းထွာ ကြဦးမှာပါ ။
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်နေသလဲ ဆုိုတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဟိုး လွန် ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ် တုန်းကလို အသင်းကြီး တစ်သင်း မဟုတ်တော့ လို့ပါပဲ . . .
ပေါ့ဘာ မပါ ၊ မာရှယျ မပါခြိနျ မှာ လူငယျတှေ နဲ့ လကျစတာ ကို အနိုငျယူမှာလား မစ်စတာ ဆိုးရှား
ပှဲစဉျ ( ၁ ) မှာ ယူနိုကျတကျ တို့ ခြဲလျဆီး ကို ဂိုးပွတျ နိုငျလိုကျ ပါတယျ ။ အားလုံး က ယူနိုကျတကျ ပွနျလာ ပွီ ၊ ဆိုးရှား ဟာ အသငျ့တျောဆုံး ၊ ၀ုဒျဝကျ ကွီး ကနျြးမာပါစေ တှေ ဖွဈကုနျ ကွပါတယျ ။ ပှဲစဉျ ၄ အပွီး မှာတော့ ဒီ အမွငျတှေ က အဖွူ နဲ့ အမညျး လို ခွားနား သှားခဲ့ ပွနျပါတယျ ။ အခု သူတို့ လကျစတာ စီးတီး နဲ့ ရငျဆိုငျ ရတော့ မှာပါ ။ ဒီ ပှဲ ကို ပါ မနိုငျ ခဲ့ဘူး ဆိုရငျ ၄ ပှဲ ဆကျတိုကျ နိုငျပှဲ ပြောကျမှာ ဖွဈပွီး သမိုငျး တဈလြောကျ အဖှငျ့ ရလဒျ အဆိုးဆုံး ဘာညာ စတဲ့ မှတျတမျး ဆိုးကွီးတှေ ရဲ့ အရှငျသခငျ ဖွဈလာ မှာ မလှဲ ဧကနျ ပါပဲ ။
ဒီလို ပွောလိုကျလို့ ယူနိုကျတကျ က လကျစတာ ကို အနိုငျ ကစား ဖို့ မဖွဈမနေ လိုအပျ နပွေီ ဆိုတာ အားလုံး ရိပျစား မိလောကျ ပါပွီ ။ ဒါပမေယျ့ လကျစတာ ကို ယူနိုကျတကျ နိုငျပါ့မလား . . .
ပှဲ မကစားခငျ လူအငျအား ကို ကွညျ့လိုကျ ရအောငျ ။ လကျစတာ ဘကျမှာ အဓိက ကစား သမားတှေ အစုံ အလငျ ပါလာ မှာပါ ။ ယူနိုကျတကျ ဘကျ မှာ ပေါ့ဘာ ၊ မာရှယျ ၊ လုချရှော တို့ မပါ သလို ဘဈဆာကာ ကိုလညျး ပှဲထုတျ မထုတျ မသခြော သေးပါဘူး ။
တကယျလို့ ဘဈဆာကာ သာ မပါလာခဲ့ရငျ ယူနိုကျတကျ ခံစဈ က တျောတျောလေး ယိုယှငျးသှား နိုငျပါတယျ ။ ဂမြေီ ဗာဒီ နဲ့ မကျဒီဆငျ တို့ ဟာ မွနျပွီး တိုးအား ကောငျးတာ ကွောငျ့ လေးလံ တဲ့ မကျဂှဲယား တဈယောကျ အကူ မပါဘဲ ထိနျးဖို့ မလှယျ ပါဘူး ။ အကျရျှလယေနျး အကွောငျး ကတော့ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ ကောငျးကောငျး သိပွီး ဖွဈမှာပါ ။
ကှငျးလယျ မှာ လညျး ပေါ့ဘာ မပါရငျ ဖနျတီးမှု ဆိုတာ ဂြိုနဲ့လား လို့ မေးရ လောကျတဲ့ အထိ ကနျြတဲ့ ကစား သမားတှေ က နုံခြာ နပေါတယျ ။ ပွငျသဈ ကှငျးလယျလူ မပါနိုငျတာ ကွောငျ့ ဒီညမှာ တျောမီနေး ၊ ဖရကျ ၊ ပါရဲရား အတှဲ ကို မွငျရနိုငျ ပါတယျ ။ ဒီ ကှငျးလယျ အတှဲ ကို အဆငျ့ သတျမှတျ ရရငျ ဆောကျသမျတနျ ၊ နယူးကာဆယျ ၊ နောဝှဈချြ တို့ အဆငျ့ လောကျပဲ သတျမှတျလို့ ရမှာပါ ။ ဒီ ကှငျးလယျ ကနေ ဘာတှေ စှမျးဆောငျ ပွမလဲ ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ခငျြ ပါသေးတယျ ။
တိုကျစဈ ပိုငျး မှာတော့ မာရှယျ မပါတဲ့ အတှကျ ရကျဖိုဒျ့ က အထောငျတိုကျစဈမှုး အဖွဈ ပှဲထှကျလာ နိုငျ ပါတယျ ။ တောငျပံ ၂ ဖကျ မှာတော့ ဂြိမျးဈ နဲ့ ဂရငျးဝုဒျ ( သို့ ) မာတာ တို့ ပါဝငျ လာဖို့ အလားအလာ မြားနပွေီး ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ ကို ဘယျတောငျပံ မှာ ထား ကစားမယျ ဆိုရငျ လကျစတာ ခံစဈ ကို အလုပျရှုပျ စနေိုငျ ဖို့ ရှိ ပါတယျ ။
ဒီညပှဲမှာ စောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာကောငျးတဲ့ တဈဦးတညျးသော ကစား သမားက ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ ပါပဲ ။ ဂြိမျးဈ ဟာ အတှငျး ကို ခြိုးဝငျ ပွီး ညာခွနေဲ့ ကနျသှငျး ရာမှာ အားပါ တိကြ ကောငျးမှနျ သူ ဖွဈကွောငျး ပဲလစျေ့ ၊ ဆောကျသမျတနျ ၊ ဘီလာရု ( လကျရှေးစငျ ခွစေမျးပှဲ ) က ဂိုးတှေ က သကျသေ ပွခဲ့ ပါတယျ ။ ညာ တောငျပံ မှာ ထားရငျ တော့ ဖွတျတငျ ဘောတှေ ကိုသာ မွငျရနိုငျ ပွီး ဘယျခွေ အား မသနျသေးတဲ့ အတှကျ ဘယျတောငျပံ က သာ အကောငျးဆုံး ဖွဈလာနိုငျ ပါတယျ ။
တိုကျစဈမှာ ပွဿနာ ရှိလာနိုငျတာက ဒီ ကစား သမား ၃ ဦး မှာ ဘယျသူ က ခေါငျးဆောငျ လဲ ဆိုတာပါပဲ ။ ၃ ယောကျ စလုံး ဟာ လူငယျ တှေ ဖွဈပွီး တှဲ ကစား တာလညျး သိပျ မကွာသေး ပါဘူး ။ ဂရငျးဝုဒျ နရော မှာ မာတာ ဆိုရငျတော့ ၄-၃-၃ ကနေ ၄-၂-၃-၁ ပုံစံ နဲ့ ကစားနိုငျ ပွီး ကှငျးလယျ နဲ့ တိုကျစဈ က လူငယျတှေ အတှကျ အခြိတျအဆကျ တဈခု အဖွဈ လုပျဆောငျ ပေးနိုငျခြေ ရှိ ပါတယျ ။ ဂရငျးဝုဒျ နဲ့ ဆိုရငျတော့ တိုကျစဈ ရော ကှငျးလယျ ပါ သူတဈလူ ငါတဈမငျး ဖွဈပွီး အစညျးပွတေဲ့ ကစားကှကျ ကို မွငျတှေ့ ရမှာပါ ။
လကျရှိ အနေ အထား အရ လကျစတာ က အထကျ အသငျး ၊ ယူနိုကျတကျ က အောကျ အသငျး ဖွဈနေ ပါပွီ ။ လကျစတာ က ၃ မှတျ ရ အောငျကွိုးစား မယျ့ အသငျး ၊ ယူနိုကျတကျ က ခံစဈ အထိုငျခြ ပွီး လကျသီးပုနျးထိုး ရမယျ့ အသငျး ၊ အနေ အထား က ဒီလို ပဲ ဖွဈသငျ့ ပါတယျ ။ ဒါကို ယူနိုကျတကျတို့ မကျြကှယျ ပွုပွီး လကျစတာ ကို အထကျ စီးဆနျဆနျ သှား ကစားရငျတော့ ကွီးမားတဲ့ ပေးဆပျမှုတှေ နဲ့ သာ ကွုံတှေ့ ရမှာပါ ။
ကစားကှကျ နဲ့ လူထုတျပုံ မှားလို့ ကတော့ ရှုံးဖို့ သခြော ပါတယျ ။ ကိုယျ့ အခွအေနေ ကိုယျ သိပွီး အောကျ အသငျး တဈသငျးလို ပွငျဆငျ ထားမှ သရေ ရဖို့ အခွေ အနေ ရှိပွီး ကံကောငျးမှ အနိုငျ ဆိုတာ မွငျရမှာပါ ။ ဟိုတယျ ရောကျ လူစာရငျးမှာ လူငယျတှေ ပါလာလို့ ၀မျးသာ အားရ အျောဟဈ ကွှေးကွျောနတေဲ့ ပရိသတျတှေ ရှိ ပါတယျ ။ ည ရောကျရငျ သူတို့ပဲ အဲ့ဒီ လူငယျတှေ အသုံးမကဘြူး ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျ ဆိုပွီး ဆဲရေး တိုငျးထှာ ကွဦးမှာပါ ။
ဘာဖွဈလို့ ဒီလို ဖွဈနသေလဲ ဆုိုတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဟိုး လှနျ ခဲ့တဲ့ ၆ နှဈ တုနျးကလို အသငျးကွီး တဈသငျး မဟုတျတော့ လို့ပါပဲ . . .